Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. तस्बिर – Janata Live
'फास्टिङ' देखि स्वर्गबाट ओर्लेकोसम्म लुम्बिनी – शान्तिका अग्रदूत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वैशाख पूणिर्मामा जन्मिए । वैशाख पूणिर्मामै बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त गरे । यतिमात्र होइन, उनले वैशाख पूणिर्मामा ज्ञान बाँडे र वैशाख पूणिर्माकै दिन मृत्युवरण गरे । दरबारमा जन्मिएर सुख सयलमा हुर्किएका सिद्धार्थ गौतम संसार बुझ्न र ज्ञानको खोजीमा दरबार छोडेर निस्किए । उनी परिवारको ईच्छा विपरीत दरबारबाट भागेर ज्ञानको खोजीमा निस्किएका थिए । कठोर तपस्यापछि उनमा अदभुत् ज्ञान (बुद्धत्व) प्राप्त भयो । बुद्धले विश्वभरि शान्ति र अहिंसाको सन्देश फैलाए । बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको थियो । अहिले यो ठाउँ अर्बौं बौद्धिष्टहरुको आस्थाको केन्द्र बनेको छ । अहिले उनका अनुयायीहरु...
राजकुमार शाक्यले लुम्बिनीको भियतनामकाे पार्कमा ५० फिटको बुद्धको मूर्ति बनाउनु भयो । उहाँले सन् २००० मा जर्मनमा भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा १२ फिट अग्लो श्वेत भैरवको मुकुट र स्वयम्भू चैत्य बनाउनु भएको थियो। त्यस्तै कपन गुम्बाको लागि ४० फिट अग्लो तिबेटन स्तुपा बनाउनु भयो । त्यस्तै सन् २०१० मा चीनको साङ्घाइमा भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा नेपाली पेभिलियनमा राख्नको लागि १०० फिट अग्लो स्वयम्भू चैत्य बनाउनु भयो । उहाँले बनाउनु भएका सानाठूला धातुका मूर्तिहरुको विवरण अनगिन्ती छन् । तर भुटानमा बनाएको भिमकाय पद्म संभवको मूर्तिले उहाँलाई २१ औं शताब्दीको अरनिकोको नाम जनमानसबाट दिलायो। उहाँको विशेषता हथौडाले धातुको पातामा हानेर सुन्दर कला बनाउनु थियो...
काठमाडौँ – हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुस्ताङको मुक्तिनाथमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढुंगाको बुद्धमूर्ति निर्माण गरिएको छ । यो मूर्ति अमेरिका निवासी व्यवसायी सोनाम लामाको करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापित गरिएको हो । केही दिनअघि एक विशेष कार्यक्रमबीच यो बुद्ध मूर्तिको धार्मिक विधिपूर्वक अनावरण गरिएको छ । सुरुमा २ करोड रुपैयाँमा मूर्ति स्थापनाको योजना बनाइएकोमा लागत बढेर ४ करोड पुगेको निर्माणकर्ता मुक्तिनाथमै जन्मथलो भएका सोनाम लामाले बताए । 'शाक्यमुनि बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो', मूर्ति स्थापनाकर्ता लामा भन्छन्, 'तिनै बुद्धको मूर्ति मुक्तिनाथमा स्थापित गरेर नेपालको अग्लो स्थानबाट बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश विश्वलाई दिन खोजेका हौँ ।' सोनामको...
पढौं गौतम बुद्धका अमृतवाणी (शाक्यमुनि बुद्धका ३४ तस्वीरसहित)
भगवान् गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन् । अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनीलाई हाम्रो कल्पका एक सम्यक सम्बुद्धको रूपमा मान्दछन् । बुद्धभन्नाले बोधिप्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ । बुद्ध कहलाईनु अघि यिनको नाम सिद्धार्थ गौतम थियो । यिनीलाई शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पनि भनिन्छ । उनले मानव जीवनलाई अर्थपूर्ण र उपयोगी बनाउने विभिन्न उपदेश दिएका छन् । त्यस्तै उपदेशमध्ये यी केहि उपदेश हुन् जसले तपाईको दृष्टिकोण नै फेरिदिनेछन्। १. सूर्य, चन्द्रमा र सत्यलाई कसैले लुकाउन सक्दैन । २. आफ्नो काम पुरा गर्नका लागि कहिल्यै पनि अरुमा निर्भर नहुनुहोस । ३. जसरी हावाले पहाडलाई हल्लाउन सक्दैन, त्यसरी नै तारिफ...
पर्यटन प्रवर्द्धनका अनेक तरिका हुँदा रहेछन् । एउटा गाउँ गाउँले महिलाहरुको लामो कपालका कारण पर्यटनको केन्द्र बनेको छ र त्यहाँ हरेक वर्ष झण्डै ८० हजार पर्यटक महिलाको लामो कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् । खबर हो चीनको । गुआंग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाहरुको गाउँ हो । उक्त गाउँका ८० जना महिला यस्ता छन् जसको कपालको लम्बाई १.४ मिटर देखि २.२ मिटरसम्म छ । महिलाहरुको लामो कपालकै कारण यो गाउँ दुनियामा चर्चित छ । महिलाको कपाल हेर्नकै लागि वर्षेनी ८० हजार पर्यटक उक्त गाउँमा पुग्ने गरेका छन् । यी महिलाहरुलाई रेड याओ पनि भनिन्छ । महिलाहरु प्रायः रातो रङको...
गुड्दैं गरेको ट्याक्टर रोक्न सक्ने संसारकैं बलियो व्यक्ति ! [९ तस्विर हेर्नुहोस्]
काठमाडौं– हामीले सामान्यतया चलचित्रहरुमा मानिसले गाडी रोकेको देखेका छौं । तर तपाईलाई जानेर आश्चर्य होला पाकिस्तानमा एकजना यस्ता व्यक्ति छन जसले चलिरहेको ट्याकटरलाई सजिलैंसँग रोक्ने क्षमता राख्छन । यदि भारतमा शक्तिशाली व्यक्ति खोज्दैं जाने हो भने दिमागमा पहिलो नाम दराज सिंह अर्थात दी ग्रेट खली हाम्रो दिमागमा आउँने नाम हो । यदि हामी भारतको छिमेकी देश पाकिस्तानको कुरा गर्छौ भने त्यहाँ पनि एक महावीर रहेका छन । अरबाब खिजर हयात अर्थात खान बाबा, जसको तौंल ४३५ किलोग्राम रहेको छ भने उनको उमे मात्रैं २५ वर्ष भएको छ । कुनै पनि हल्क भन्दा कम छैन। अरबाब आफुलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको...
अप्सरा रानीकाे हट अवतार (फाेटाेफिचर)
मुम्बइ– दक्षिण भारतीय अभिनेत्री अप्सरा रानी बोल्ड लुकका कारण प्रायः चर्चामा रहन्छिन्। निर्देशक रामगोपाल बर्माकी अभिनेत्रीको सोसल मिडिया अकाउन्ट बोल्ड र हट तस्बिरले भरिएको हुन्छ। निर्देशक बर्माको नयाँ फिल्म ‘डेन्जरस’ मार्फत अप्सरा दर्शकमाझ आउँदै छिन्। यो भारतको पहिलो लेस्बियन क्राइम–थ्रिलर फिल्म भएकाे बताइएकाे छ। हालै यो फिल्मको ट्रेलर लन्च गरिएको छ। अप्सराले ट्रेलर लन्चपछि इन्स्टाग्राममा फिल्मको पर्दा पछाडिका धेरै फोटो पोस्ट गरेकी छन्।
फर्पिङ (ह्याङ्लेश्याे) पद्मसंभव गुरू गुफा (फोटोसहित)
Padmasamvawa Mahamudra Cave, Pharping यो पवित्र गुफा काठमाण्डौं बाट ३५ कि.मि.दक्षिण–पश्चिम शेषनारायण फर्पिङमा पर्दछ । हिमाली भोट भाषामा यसलाई ह्याङ्लेश्योद् ढाफुक् भनिन्छ । गुरु पद्मसंभव मारतिका हलेसी पश्चात दोस्रो पटक ८ औं शताब्दि लगभग सन् ७७७ मा नेपालमा आउनु भई सम्यक (ह्याङधाक) तान्त्रिक साधनाको अभ्यास गर्ने विचार गर्नुभए अनुसार सो सिद्धि प्राप्त गर्न नेपाल आउनु भएर विशेष ठाउँको छनौट गर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा वाञ्छित स्थान फर्पिङको शेषनारायण गुरु गुफा भएका हुनाले यही गुफा छनौट गर्नुभयो । यस फर्पिङ क्षेत्र पवित्र आर्यभूमि भएको आर्य भन्नाले दर्शनमार्ग (धर्माता स्वभावको बोध) वा बोधिसत्वकाेेे १० भुमि मध्ये प्रथम भुमि प्राप्त गरेकोलाई बुझिन्छ । जुन कुरा...
नेपाली चलचित्र ‘कृ’ बाट एकाएक चर्चामा आएकी नायिका हुन् अदिति बुढाथोकी । उनले भुवन केसीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कृ’मा अनमोल केसीसँग नेपाली चलचित्रमा पाईला टेकेकी थिइन भने उक्त चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रै कलेक्सन गरेर सुपरहिट साबित भएको थियो । उनले ‘कृ’ खेली सकेपछी अरु कुनै नेपाली चलचित्रमा काम गरेकी छैनन्। चलचित्र ‘कृ’ खेली सकेपछी उनको चर्चा परिचर्चा एकाएक चुलिएको छ । उनी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने तयारीमा थिइन् । तरपनि लकडाउनका कारण उक्त चलचित्रको छायांकन सुरु हुन सकेन । दर्शकको मन- मुटुमा बस्न सफल भएकी उनी नेपाली फिल्म ‘कृ’ मा अनमोल केसीसँग अभिनय गरेपछि दर्शकको राम्रै साथ...